Akụkọ banyere Bricmaker - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Ihe ịga nke ọma nọọrọ onwe ya R&D JKY80 / 70-4.0 Hard-Plastic Double-Stage agụụ Extruder, nọgidere n'ihu ahịa congeneric ngwaahịa.
Ọrụ ibugharị ọwara nwere ike ịbanye na Vietnam & Laos ahịa wee bido ịgba ọsọ.
Banyere n'ahịa Vietnam ma guzobe ụlọ ọrụ alaka ụlọ ọrụ ebe ahụ maka ahịa na ọrụ na-arụ ọrụ.
Bricmaker Modernized & Intelligent workshop bidoro ịrụ ọrụ, ngwaahịa dị elu, ọrụ, teknụzụ na njikwa kwadoro ọrụ ngosi ngosi mara mma, Bricmaker ghọrọ onye ndu nke ụlọ ọrụ.
United na Mahadum Zhejiang, guzobe Mahadum Zhejiang - Bricmaker Intelligent Brick & Tile Machinery R&D Center.
Nọgidere na-ebubata nkà na ụzụ Spanish maka ịbịaru & ịmepụta ihe ọkụkụ osisi na-emepụta ngwa ngwa na nkwụsi ike dị elu, arụmọrụ dị elu, ike dị ala, wee ghọọ onye ndu nke ngwaahịa mba. Amalitere ụlọ osisi nwere ọgụgụ isi wee webata ngosipụta mba na oke ọnụ ahịa.
Onwe ya R & D Strong-inggwakọta Extruder nlereanya nke SJ400x46, Roller Crusher nlereanya nke GS120x100, Hammer Crusher nlereanya nke PCX1210 na a usoro nke ihe nhazi equipments na ala ume, elu arụmọrụ na a pụrụ ịdabere na àgwà, na-ekwe nkwa na àgwà nke elu-ọkwa sintered ngwaahịa.
Mbubata Italy nke teknụzụ dị elu, ihe ịga nke ọma R & D China anụ ụlọ kachasị dị ugbu a nke JKY75 / 65E-4.0 Hard-Plastic Double-Stage Vacuum Extruder, na-aga n'ihu n'ihu ngwa ahịa ngwaahịa.
Ndị FANUC kacha elu nke ndị Japan nabatara, jikọtara ya na SEWEN motor reducer & SIEMENS PLC system automation control system nke German, mepụtara ụlọ klaasị mbụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, ma banye n'ọma ahịa nke ọma, duru nduzi nke osisi brik. mmepụta na unmanned & ọgụgụ isi.
Guzosie ike echiche nke ụlọ ahịa, batara n'oge mmepe ọsọ ọsọ. Melite otu ọkachamara pụrụ iche maka akpaka Cutting-Grouping-Stacking system R&D. Dị ka US elu technology, R&D mbụ set nlereanya nke JY75C-4.0 Ike-plastic Double-Stage agụụ Extruder. Gbasaa mmepụta akporo na kwagara Industrial Park.
Tọrọ ntọala Zhejiang Xiehe Brick & Tile Machinery Institute.
Xiaoshan Brick & Ngidi Machinery Factory guzobere Hangzhou Xiaoshan Xieos Brick & Tile Machinery Co., Ltd.
Setdị setịpụrụ nke mbụ JKR45 / 40 Vacuum Extruder mụrụ.
Zhejiang Construction Materials Plant melite Xiaoshan Brick & Ngidi Machinery Factory.
E guzobere Zhejiang Construction Materials Plant (nke obodo nwere) ma tinye ya na mmepụta, weta brik & taịl nile maka iwu.